माधव नेपाल भन्छन्ः प्रधानमन्त्रीज्यू, गल्ती गर्ने जो सुकै होस् डण्डा लगाउनुहोस्
निशान न्युज आश्विन २८, 2075
काभे्रपलाञ्चोक । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा गल्ती गर्ने कसैलाई नछोडी डण्डा लगाएर भएपनि तह लगाउन आग्रह गरेका छन् ।
काभे्रपलाञ्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको नगरबस उद्घाटन सभालाई आइतबार कुन्ताबेँसीमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भने सरकारसँग स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीले वर्तमान सरकारले राम्रो गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
नेता नेपालले प्रदेश नं ३ को राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सबै पक्ष छलफलमा जुट्नुपर्ने बताए । उनले भने, “काभे्रपलाञ्चोक नै राजधानी राख्ने विषयमा तर्क पुष्टि गर्नुहोस् ।”
नेता नेपालले काभे्रपलाञ्चोकको बनेपास्थित नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने विषयमा आफूले पनि गम्भीररुपमा पहल गर्ने बताए । उनले पाँचखाल नगर चीनसँगको व्यापारका लागि उपयुक्त भएकाले काभे्रपलाञ्चोकको महत्व निकै रहेको बताए ।
नेता नेपालले स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा सुशासन सिकाइ जनताको आँखाको नानी बन्नु पर्ने समेत बताए । उनले भने “जनताको आँखाको नानी बन्ने उपाय खोज्नुस् ।” “जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसके वर्तमान जनप्रतिनिधि र सरकारको औचित्य पूरा हुँदैन”, नेता नेपालले भने । नपाले हेलम्बु यातायात सेवा समितिसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रमा छ वटा नगरबस सञ्चालन गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारी आज नौ दिने भ्रमणमा चीन जाँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार चीन जाँदैछिन्। चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने दोस्रो ...
आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको कांग्रेसको जागरण अभियान दुई हप्ता पछि सर्‍यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियान दुई हप्ता पर सरेको छ । पुर्वकोषाध्यक्ष रामकृष्ण ताम्राक...
विप्लवका तेस्रा ठूला नेता सुदर्शन जेल चलान
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीका तत्कालीन मध्यकमाण्ड इन्चार्ज हेमन्...
विषय प्रवेशमै टुंगियो सरकार र राप्रपा बीचको वार्ता
काठमाडौँ । हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना लगायतका २२ बुँदे माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको राष्ट्रिय प्...
देशमा फेरि विद्रोह गर्ने भ्रम नपाल्न प्रचण्डको आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द...
बीआरआईको योजनाका लागि लिइने ऋण सकारात्मक हो: राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बीआरआईको योजनाका लागि लिइने ऋण सकारात्मक रहेको बताएकी ...
झपट रावल यसकारण सामाजिक अभियान्ता हुन्
भपट रावल एक आन्दोलनको नाम हो, परिवर्तनको नाम हो र भरोसायोग्य कम्यूनिष्ट युवा नेताको नाम हो । काठम...
महिलालाई यौन सम्पर्क गर्न के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ?
तीनपटक अन्तर्वार्तामा गुल्टिएरै भए पनि यसरी नाम निकालेँ
ओ हो, विवाह त होस् न यस्तो !
पुरुषले आफ्नो कुन भाग हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिलाहरु ?
मध्य रातमा विप्लवको आयो यस्तो चेतावनी
बिर्सेर पनि यी कुरा सँगै नखानुस्, ज्यान जान सक्छ
मानिस मरिसकेपछि उसको नाकमा किन कोचिन्छ कपास ? यस्तो छ कारण
२० प्रतिशत तलब बढाउन लविङ गर्न व्यस्त छन् कर्मचारीहरु, कति बढ्ला त यो वर्ष तलब ?
बँदेलले हैरान बनायो मण्डन देउपुरबासीलाई